पहिले हामी एमालेमा मिल्छौं, त्यसपछि माधव नेपाललाई ल्याउँछौँ: युवराज ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता]
सन्दर्भ : एमाले विभाजन
एमालेको नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपाल प्यानलबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका युवराज ज्ञवालीपार्टी विवादका हरेक मोडमा नेता नेपालसँगै रहे ।
एमालेभित्र देखिएको विवादका विषयमा पनि नेपालसँग उनको धारणा समान थियो । केपी ओलीले पार्टीलाई विधि, पद्धतिमा नचलाएको र अहंकार देखाएको भन्दै उनीहरू निरन्तर विरोधमा रहे ।
आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्दा माधव नेपालले एमालेबाट छुट्टिएर एमाले (समाजवादी) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । पार्टी फुट्ने बेलामा भने ज्ञवालीसहित नेपाल समूहका केही प्रभावशाली नेताले साथ दिएनन् ।
अहिले उनी १० बुँदे सहमतिका आधारमा एमालेको विवाद मिलाएर पार्टी एकता गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
अन्तिम समयमा आएर नेता नेपालको साथ छाडेका ज्ञवालीसँग लोकान्तरका लागि उद्धव थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
एमाले विभाजन भयो र एमाले (समाजवादी) बन्यो । लामो समयसम्म माधव नेपालसँगै रहनुभएको तपाईंले अन्तिम समयमा साथ दिनुभएन । मूल पार्टीमा पनि तपाईंहरू फर्किनुभएको छैन, अब के गर्नुहुन्छ ?
केपी ओलीले गल्ती गर्नुभयो । गल्ती गरेबापत नै उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट समेत हट्नुपर्‍यो । त्यसपछि पार्टी एकताको सन्दर्भमा कार्यदल बन्यो र १० बुँदे सहमति पनि भयो ।
त्यो १० बुँदे माधव नेपालसहित हाम्रो बीचमा छलफल भएर नै टुङ्गो लागेको हो । त्यो कार्यदलको मात्रै निष्कर्ष होइन ।
त्यसबेला माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी बैठकले पनि १० बुँदेलाई उपलब्धि भनेको छ । यो सर्वसम्मत निष्कर्ष हो ।
माधव नेपालको पनि निष्कर्ष हो । यो उपलब्धि हो भने त्यसैमा टेकेर पार्टी एकतातर्फ जानुपर्छ भनेर समान हैसियतको दुई अध्यक्ष हुन्छ भने मिलाऔं भनेर प्रयत्न भइरहेको हो ।
अन्तिममा आएर समान हैसियतको अध्यक्ष पाउने स्थिति रहेन तर पनि वार्ता चलिरहेको थियो । अन्तिम समयमा घनश्याम भुसालालाई पनि अध्यक्षसँग छलफल गर्न पठाउनुभएको थियो । समान हैसियतको अध्यक्ष पनि हुन्छ कि भन्ने सूचना पनि आइरहेको थियो । विवाद समाधान हुन्छ कि भन्ने आशा पनि थियो ।
तर, अध्यादेश आएको हुनाले केपी ओलीले तुरुन्त कारवाही गर्नुभयो । तुरुन्त अध्यादेश आउनु, केपी ओलीले कारवाही गर्नु र अर्को दिनचाहिँ माधव नेपालले त्यही कारवाहीलाई देखाएर एकताको ढोका बन्द भयो भनेर अर्को पार्टी खोल्नुभयो ।
यहाँ यस्तो संयोग मिलेको छ कि एमालेलाई जसरी पनि फुटाउनुपर्छ भन्ने ग्राण्ड डिजाइनअन्तर्गत यी कामहरू भइरहेका छन् ।
यसको मतलब एमाले विभाजन गर्न बाह्य शक्तिको भूमिका रह्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
एक दुई दिनमा यी सारा गतिविधि भइरहेको छ नि त । एकै दिनमा एक्सनको रियाक्सन फेरि एक्सन देखिएको हुँदा एमालेलाई जसरी पनि फुटाउने योजनाअनुसार काम भएको भन्न सकिन्छ ।
केपी ओलीले पार्टी विधि, पद्धतिमा चलाएनन्, हेपाहा प्रवृत्ति भयो, अहंकार देखियो भनेर संयुक्त रूपमा केपी ओलीको विरोध गर्नुभयो तर, माधव नेपालले नयाँ पार्टी बनाउने बेलामा त साथ दिनुभएन, किन यसरी धोका दिनुभएको ?
एकताका लागि वार्ता प्रक्रिया चलिरहेको थियो । १० बुँदे सहमति भएको थियो । केपी ओलीले सत्ता छाड्ने परिस्थिति आएकै हो । नयाँ परिस्थिति निर्माण भएकै हो ।
जुन बेला यी सबै कामहरू भएको थिएन, त्यसबेला त ढोका बन्द थियो । आयोजक कमिटी बनेको थियो । सबैलाई निकालिएको थियो । पदाधिकारीहरू निस्कासनमा परेका थिए । १० बुँदेपछि त नयाँ परिस्थिति बनेको हो नि ।
केपी ओली संस्थाबाट हट्नेसम्मको स्थिति आइसकेको हुँदा एकताको लागि वातावरण बनेको थियो ।
१० बुँदे सहमतिलाई एक महिना पुरै गिजोल्दा पनि तपाईंहरूले अपेक्षा गरेजस्तो निष्कर्ष आउन सकेन भनिन्छ नि ?
१० बुँदे सहमति पर्याप्त भएन भनेर समान हैसियतको अध्यक्षको कुरा एक महिनासम्म छलफल चलिरह्यो । टुंगो लागेन । छलफल चलिरहेकै छ, नआत्तिनुहोस् भनेका भनेका थियौं ।
स्थायी कमिटीको बैठक बसौं भनेर माधव कमरेडलाई भनेका थियौं । स्थायी कमिटीको बैठक नबसी उहाँ अचानक गएर केही साथीहरूसँग सल्लाह गरेर पार्टी दर्ता गर्न पुग्नुभयो । त्यसकारण, हामीले धोका दिएको होइन ।
एकताको प्रक्रिया चलिरहेको बेलामा त्यसलाई टुंगोमा नपुर्‍याई उहाँ अचानक जानुभयो । त्यो नगर्नुपर्ने कुरा थियो, तर दुःखद् कुरा भयो ।
माधव नेपालले सरकारलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न लगाउनुभयो तर, त्यस विषयमा तपार्इंहरूलाई चाहिँ जानकारी नै गराउनुभएन भन्ने तपाईंहरूको गुनासो रहेछ, हैन ?
अध्यादेश सामान्य कुरा होइन । यो प्रतिगामी हो र खतरनाक हो । नेपालको राजनीतिलाई झनभन्दा झन अस्थिरतामा धकेल्ने प्रयास हो । अध्यादेश ल्याउनु असाध्यै ठूलो गल्ती हो । यो अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ ।
अध्यादेश जारी गर्ने विषय हामीलाई थाहै छैन । उहाँले कहाँकहाँ सम्पर्क गर्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो, केही थाहा छैन । हामी एकताका लागि निरन्तर प्रयासमा थियौं ।
त्यही बेला अध्यादेश ल्याउन लगाएर एमाले पार्टी नै गठन गर्नुभयो । यता एमाले त छँदै थियो । एमाले नै गठन गर्नका लागि एमाले किन छाडेको ?
माधव नेपालसँग पनि नहुने, केपी ओलीसँग पनि मिल्न नसक्ने अवस्थामा तपाईंहरू हुनुहुन्छ । अब तपाईंहरूको राजनीतिक भूमिकाचाहिँ के हुन्छ ?
१० बुँदे सहमति पनि निरन्तर संघर्षको उपलब्धि हो । त्यसबेला हाम्रो (नेपाल–खनाल) समूहको केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन पनि गरेको छ । स्थायी कमिटीमा बारम्बार छलफल गरेर त्यसलाई उपलब्धि पनि भनेका छौं । उपलब्धि भनेको सकरात्मक कुरा हो । त्यही उपलब्धिमा टेकेर एकताको प्रयास गर्न सकिन्थ्यो नि ! विभाजनतिर जानुहुँदैनथ्यो । अब हामी १० बुँदे कार्यान्वयनमा लाग्छौं ।
१० बुँदे कार्यान्वयनका लागि एमालेको स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी भएर छलफल गर्नुहुन्छ ?
१० बुँदेमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा लेखिएको छ । यो सन्दर्भमा उहाँहरूसँग छलफल गर्छौं र कार्यान्वयन गर्ने गरी एकतामा जान्छौं ।
केपी ओलीले के कुरा मानिदिनुभयो भने एमालेको बैठकमा सहभागी हुने अवस्था रहन्छ त ?
मुख्य कुरा १० बुँदे हो । त्यसमा धेरै कुरा छन् । हामी त्यत्तिकै लुरूलरू जाने पक्षमा छैनौं र विभाजनलाई साथ दिने पक्षमा पनि छैनौं ।
तपाईंहरूले भनेको केपी ओलीले मान्नुहुन्न भन्ने त अहिलेसम्मको प्रयासमा देखियो । तपाईंहरू आफ्ना विषय छाड्दैनौं पनि भन्नुहुन्छ, अनि एकता त झन पेचिलो भएन र ?
दशकौंदेखि यो भन्दा पनि पेचिला विषयमा संघर्ष गर्दै आएका हौं । यस सन्दर्भमा हामीलाई प्रसस्त अनुभव छ । कुनै विषय एक क्षणका लागि पेचिलो हुनसक्छ । त्यसको समाधान गर्न सक्छौं । यसका लागि हामीसँग दृष्टिकोण छ, विचार छ, हिम्मत छ, साहस छ ।
त्यस्तो एकता एमाले (समाजवादी) सहितको हुन्छ कि माधव नेपालको साथ छाडेकाहरूको मात्रै हुन्छ ?
हामी व्यक्तिसँग मिल्न जाने होइन । हामीले बनाएको घर हो । हामीले निर्माण गरेको ठाउँ हो । कसैको घरमा जाने होइन । कसैसँग आत्मसमर्पण गर्ने पनि होइन । १० बुँदे सहमतिमा टेकेर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन जाने हो ।
कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यसमा सल्लाह हुँदैछ । पार्टीभित्रको गलत प्रवृत्तिविरुद्ध अन्तरसंघर्ष गर्ने हो । अहिले उहाँहरू (माधव नेपाल) विभाजनमा जानुभएको छ । उहाँहरू तत्काल के गर्नुहुन्छ, भन्न सकिन्न ।
पहिला त हामी मूल पार्टीमा एकताबद्ध हुन्छौं, त्यसपछि माधव नेपाल सहित जो विभाजित भनिएको छ उहाँहरूलाई समेत एकताबद्ध पार्ने प्रयत्न गर्छौं । पहिला हामी एकताबद्ध हुन्छौं ।
तपाईंहरूको प्रयासले माधव नेपालहरूलाई मूल पार्टीमा फर्काउने सामर्थ्य राख्छ ?
हामी वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको एकताको आन्दोलनमा निरन्तर संघर्ष गरेर आएका हौं । हामी जहिले पनि एकताको पक्षमा रहन्छौं । त्यहीँ प्रयास गर्छौं ।
तपाईंहरूलाई अहिले अप्ठ्यारो भएर मात्रै एमाले (समाजवादी)मा नजानुभएको हो, ढिलोचाँडो माधव नेपालसँगै जानुहुन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ, केही समयपछि एमाले (समाजवादी)मै जाने हो ?
व्यक्ति विशेषसँग मलाई केही मतलब छैन । नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मान्छु । व्यक्ति प्रधान होइन, पार्टी प्रधान हो भन्ने कुरा मान्छु । नेता ठीकसँग चलेपछि उसलाई नेता मान्न सकिन्छ ।
व्यक्ति ठूलो कुरा होइन । हामी आफैँमा पनि नेता हौं । हाम्रो पनि ५० वर्षभन्दा बढीको राजनीतिक अनुभव छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अध्ययन गरेका छौं । सबै कुराको फेस गरेर यहाँसम्म आएका छौं ।
पार्टीलाई एकताबद्ध पार्ने नै मुख्य प्रयास हुन्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्ने काममा नै प्रयत्नशील रहन्छौं ।